Guqula i-Pro: I-Lead Generation ne-imeyili yokungena kokungena kwe-imeyili kweWordPress | Martech Zone
NgoMsombuluko, Okthoba 19, 2020 NgoLwesithathu, Februwari 9, 2022 Douglas Karr
Njengoba kunikezwe ukubusa kwe- WordPress njengohlelo lokuphathwa kokuqukethwe, kuyamangaza ukuthi ukunakwa okuncane empeleni kukhokhelwa kanjani kungxenyekazi eyinhloko uqobo ukuguqulwa. Cishe konke ukushicilelwa - noma ngabe kuyibhizinisi noma ibhulogi yomuntu siqu - kubukeka kuguqula izivakashi zibe ababhalisile noma amathemba. Noma kunjalo, azikho izakhi ngaphakathi kwepulatifomu eyinhloko yokwamukela lo msebenzi.
Guqula i-Pro iyi-plugin ephelele ye-WordPress enikeza isihleli sokuhudula bese uphonsa, izici eziphendulayo zeselula, ne-plugin engeke idonsele ijubane leWebhusayithi yakho yeWordPress phansi. I-plugin inikeza inkululeko ephelele yokuklama, izimbangela zokuziphatha, inethoni yokuhlanganiswa, kanye netoni yezifanekiso ezinhle okufanele ziqale ngazo.
Landa i-Convert Pro ye-WordPress
Guqula i-Pro - I-Email Opt-In ne-Lead Generation Plugin
Guqula i-Pro iyi-plugin elula futhi esebenzayo ye-WordPress popup engasetshenziswa ngabathengisi be-inthanethi, ama-blogger, amawebhusayithi e-commerce, onjiniyela nawo wonke amanye amabhizinisi amancane namakhulu afisa ukwandisa ukuguqulwa kumawebhusayithi awo. Izici zifaka:
Phuma kwezobuchwepheshe bezinhloso - Nge-Convert Pro ungabamba kalula ukulahla izivakashi. Idizayini nemilayezo ekhanyayo yokubamba ukunakwa!
Ukuhlolwa okulula kwe-A / B - Isici sokuhlola se-A / B seConvert Pro sikuvumela ukuthi udale okuhlukile, ukuzivivinye, futhi ugcine lokho okusebenzela kakhulu izethameli zakho.
Ama-popups amaningi - Nge-Convert Pro, ungakha ama-popups anezinyathelo eziningi njengama-popups wokuqinisekisa ubudala, yebo awekho ama-popups, nokunye okuningi!
Isabela Ngokuphelele - Inguqulela Pro isabela ngokuphelele. Yonke imiklamo eyenziwe kusetshenziswa le-plugin iyinsiza, iyasebenziseka, ne-Google iyasebenziseka.
Kokuzivelelayo Kokuchofoza - Ngaphandle kokukhetha okukhulu kwezimbangela, ungakha futhi izigelekeqe ezivela lapho abasebenzisi bachofoza ku- umbhalo, isithombe, inkinobho, njll.
Ukukhomba Okuthuthukile - Sebenzisa i-Convert Pro bese wenza imilayezo eyenziwe yaba ngeyakho engakhonjiswa ngesikhathi esifanele, ngaphambi kwezithameli ezifanele.
Ukuhlanganiswa Kwe-imeyili - Guqula i-Pro isebenza ngaphandle komthungo nabo bonke abaphendula ngokuzenzakalela nabanikezeli bokumaketha be-imeyili. Ngokusebenza okuhlukile kokungenisa nokuthekelisa, idatha yakho ye-imeyili ebalulekile manje isiyasebenza kakhulu futhi iyashesha. Ukuhlanganiswa kokuchofoza okukodwa kwenza kube lula ukusebenza ekusethweni okusheshayo ukuthwebula nokuphatha idatha yokuhola.
Guqula i-Pro iyi-plugin eqinile ezokusiza ukwakha uhlu lwe-imeyili, ukushayela ithrafikhi, ukukhuthaza amavidiyo, ukukhuthaza okunikezwayo, nokusebenzisa kakhulu ukuchitha kwakho kokuthengisa. Uma ufuna ithuluzi lokumaketha elinjengaleli, iConvert Pro iyindlela engabizi kakhulu!
Inguqulela Pro imeyili Ugaxekile Ukuhlanganiswa
Ukuhlanganiswa kufaka phakathi I-ActiveCampaign, AWeber, Benchmark, Campaign Monitor, Campayn, CleverReach, Ukuxhumana okuqhubekayo, ConvertFox, ConvertKit, Customer.io, Drip, ElasticEmail, GetResponse, I-Hubspot, iContact, Infusionsoft, Klaviyo, Mad Mimi, Mailchimp, MailerLite, Mailgun, Mailjet, MailPoet, Mailster, MailWizz, Mautic, Moosend, ONTRAPORT, SendFox, SendGrid, I-SendinBlue, Sendlane, SendReach, Sendy, SimplyCast, TotalSend, VerticalResponse, noZapier.
Tags: ukuhlolwaI-ActiveCampaignAWeberuphawu lokubonisaUmkhankaso WokumkhankasoCampaynCleverreachUkuxhumana okuqhubekayoguqula proInguqulelaGuqulaIkhasimende.ioukuvuzaI-ElasticEmailGetResponseindawoIContactInfusionsoftKlaviyoMad Mimii-mailchimpI-MailerliteIsibhamu seposii-mailjetImeyiliPoetMailsterImeyiliWizzIsi-MauticI-Moosendizigelekeqe eziningiama-popups wokuchofozaumabhebhanavelaukukhomba okuzivelelayoThumelaFoxI-SendgridI-SendinBlueSendlaneSendReachKuthunyelweI-SimplyCastIngqikithi yokuthumelaukuphenduka mpoWordPressi-plugin ye-wordpress popupzapper